डा. काफ्ले भन्छन, अरु दिन भ्याईदैन भने जन्मदिनमा त गरौ किड्नी जाँचौ - Health Today Nepal
डा. काफ्ले भन्छन, अरु दिन भ्याईदैन भने जन्मदिनमा त गरौ किड्नी जाँचौ
December 27th, 2017 स्वास्थ्य सुझाब0comments
डा. ऋषिकुमार काफ्ले,
किड्नीले हामीलाई बचाएको हुन्छ । त्यसैले हामीले किड्नी बचाउन जान्नुपर्छ । किड्नी बिग्रिसकेपछि यसको उपचार सहज हुँदैन । कि त प्रत्यारोपण गर्नुपर्छ नभए डाइलासिस गर्नुपर्छ । यी दुवै सजिलो काम होइन । किड्नी बिग्रिसकेपछि उपचारमा जानुभन्दा किड्नी बिग्रिनै नदिने उपाय अपनाउनुपर्छ । प्रत्येक नागरिकले अरू दिन भ्याइँदैन भने पनि आफ्नो जन्मदिनका दिन मिर्गौला परीक्षण गरौं । त्यो महँगो छैन । एक सय ५० रुपैयाँमा जाँच गर्न सकिन्छ । अहिले ९० प्रतिशत नेपालीलाई आफ्नो किड्नीका विषयमा जानकारी छैन । पहिलेको तुलनामा यसको उपचार केही सहज भएको छ । अहिले स्वदेशमै किड्नी प्रत्यारोपण गर्ने सुविधा छ । किड्नीमा समस्या देखियो भने जिन्दगी सकियो भन्थे । धनीमानी बाहेकको पहुँचमा थिएन उपचार सेवा । उपचार महँगो थियो । प्रत्यारोपण त झन् महँगो । तर हामीले हरेस खाएनौं । लागिरह्यौं । अहिले सरकारले डाइलासिस निःशुल्क गर्यो । गरिब जनताको पनि उपचारसम्म पहुँच बढेको छ । तर बिरामीको संख्या भने तीव्र गतिमा बढेको छ । २६ लाख किड्नीका बिरामी छन् । हरेक वर्ष १० हजार नयाँ मिर्गौलाका बिरामी थपिने गरेका छन् ।
सरकारले डाइलासिस निःशुल्क गरिदियो । यतिले मात्र पुग्छ त ? के डाइलासिस गराउनु राम्रो हो ? प्रश्न उब्जेको छ, ‘के हामी अब डायलासिस गरेर मात्र बस्छौं त अब ?’
अब हामीले किड्नी प्रत्यारोपण र डाइलासिसतिर मात्र ध्यान केन्द्रित गर्ने होइन । किड्नी बचाउनतिर लाग्नु आवश्यक छ । सरकारले डायलासिस निःशुल्क दिएकै त छ नि भनेर किड्नी बचाउनतिर नलाग्ने हो भने भविष्यमा यसले भयावह स्थिति ल्याउने निश्चित छ । किड्नीका रोगीको संख्या लाखौं हुन थालेपछि सरकारले निःशुल्क डाइलासिस सेवा उपलब्ध गराउन सक्ला त ? यहाँ पनि शंका छ । सरकारले यसका विषयमा व्यापक जनचेतना विस्तार गर्नु आवश्यक छ । उपचार गराउनुभन्दा रोगै लाग्न नदिने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ ।
प्रत्येक नागरिकले अरू दिन भ्याइँदैन भने पनि आफ्नो जन्मदिनका दिन किड्नी परीक्षण गरांै । त्यो महँगो छैन । एक सय ५० रुपैयाँमा जाँच गर्न सकिन्छ । अहिले ९० प्रतिशतलाई आफ्नो मिर्गौला कस्तो अवस्थामा छ भन्ने थाहा छैन । किड्नीले तपाईंलाई बचाएको छ । त्यसलाई तपाईंले नै बचाउनु पर्छ ।
Previous article सिटामोल उत्पादन हुने खबरले उपभोक्ता खुशी
Next article भट्टलाई कोरियामा आउटस्टेन्डिङ पर्फमेन्स अवार्ड